Samsung Pay dia ho tonga any Espana amin'ny 2 Jona | Androidsis
Efa ela loatra no niandrasantsika ny fahatongavan'ny rafitra fandoavam-bola finday any Espana. Na dia marina aza fa misy orinasa sasany mamela anao hampiasa an'ity rafitra fandoavam-bola ity, ny marina dia tsy ohatra amin'ny fandoavam-bola amin'ny finday i Espana, soa ihany fa toa hiova tsy ho ela ny raharaha. Ary izany no izyAmin'ny 2 Jona, ho tonga ny rafitra Samsung Pay amin'ny orinasa marobe.
Samsung Pay dia ho tonga eto amintsika amin'ny 2 Jona
Ny loharanom-baovao, ny gazety El País, Tena azo itokisana izy io ka azontsika atao ny mieritreritra fa marina ity fampahalalana ity ary afaka manamarina isika fa, rehefa niandry ela dia tonga ihany ny karama Samsung tao amin'ny firenentsika. Mazava ho azy, amin'ny fomba voafetra.
Ary ny isan'ny terminal izay mifanaraka amin'ny rafitra fandoavam-bola Samsung Pay dia voafetra ihany: Samsung Galaxy S7 sy S7 Edge, Galaxy S6, Galaxy A5 ary Galaxy Note 5. Na dia antenaina aza fa amin'ny ho avy tsy ho ela dia hanitatra ny isan'ny fitaovana mifanaraka amin'ity serivisy ity izy ireo.
Amin'ny tranga any Espana, Samsung dia hampihatra ny maodely fandoavam-bola mifototra amin'ny teknolojia NFC, mamela ny mekanisma misy ny andriamby. Ny antony? Araka ny nosoratan'i Samsung volana vitsivitsy lasa izay tao amin'ny bilaoginy: "ny mponina any Espana dia tena mahalala vola amin'ny carte contactless"
Ankoatr'izay, Samsung Pay dia tsy mitaky komisiona amin'ny fampiasana ny serivisy, ankoatry ny mifanentana amin'ny karatra VISA, American Express ary Mastercard, noho ny fifanarahana natao La Caixa, Abanca na orinasa toa an'i El Corte Inglés.
Serivisy izay Tara be vao tonga raha oharina amin'ny firenena hafa. Andao manantena isika fa handray ny Samsung Pay amin'ny fomba tsara ny besinimaro ary manomboka mampiasa ny serivisy hatrizay, toa ahy iray amin'ireo serivisy mahaliana indrindra izany, saingy mila fanerena tsara avy amin'ireo mpampiasa izy mba hanohizan'ireo mpanamboatra lehibe miloka ihany Espaniola hampiasa rafitra fandoavam-bola amin'ny finday.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Samsung Pay dia ho tonga any Espana amin'ny 2 Jona
ToniWi dia hoy izy:
Tonga tara ary ratsy. Ny tena revolisiona dia ny fahafahany mandoa amin'ny fotoana rehetra amidy, maka tahaka ny tadin'ny andriamby. Izao dia hay fa tsy azonao ampiasaina afa-tsy io raha manana banky manokana ianao ary amin'ny orinasa vitsivitsy dia maneso izahay. Misy ny vahaolana amin'ny banky izay efa nanolotra zavatra maro efa ela.
Valiny amin'i ToniWi
Antony 4 handresena lahatra anao hampiasa Google Spaces